Ngaba zonke iinkonzo ze-SEO zakhiwe kwisicwangciso sokuthengisa?
Ingxelo yonyani ukuba isicwangciso seenkonzo ze-SEO kuphela kwiimveliso ezinkulu, kumazwe ngamazwe. Kwakulungele ukulungiselela amashishini amancinane naphakathi. Isicwangciso socwangciso seenkonzo ze-SEO esilungileyo sisona sinokuthenjwa kunye nesingqinisiseko sokuhlangabezana neemfuno zakho zezoshishino kwaye ufike kwi-TOP yeenjini zokukhangela - nanobionic κολαν καλυτερη τιμη.
Ngokomlinganiselo wolwazi, ngaphezulu kwama-80% amabhizinisi amakhulu kunye nesiqingatha seenkampani ezincinci zinecebo lokuthengisa. Ezi manani zibonisa ukuba isicwangciso seenkonzo ze-SEO kufuneka sibe neendlela ezifunekayo kubathengisi be-intanethi.
Ngoko-ke, makhe sixoxe ngendlela amawebhusayithi aphumelele ngayo apho ahlala khona namhlanje.
Inkcazo ye-SEO isicwangciso seenkonzo
Isicwangciso seenkonzo ze-SEO sisebenza njengesandiso sesicwangciso soshishino esinika abanikazi bewebhusayithi isicwangciso esithile sokuphromotha sokufikelela kwiinjongo zoshishino. Inika isiqulatho esicacileyo kubahwebi be-intanethi indlela yokunyusa amaziko abo ukuya kwiGoogle. Esi sicwangciso sichaza onke amathuba angundoqo kunye naluphi na amathuba angasongela impumelelo yakho. Kudinga ukucwangciswa okucwangcisiweyo kunye nokuhlalutya kunye nokuqikelela izinto ezincinci kwinkqubo yokucwangcisa. Isicwangciso sakho seenkonzo ze-SEO siquka umyalelo wesinyathelo-by-step ufuneka njani ukuphumeza izicwangciso zokwenza ubuchule bokuphucula ukukhishwa kwegama lakho nokuphakamisa izinga lokuguqulwa.
Ziziphi izizathu zokwakha isicwangciso seenkonzo ze-SEO?
Okokuqala, udinga isicwangciso seenkonzo ze-SEO kuba iya kunceda ukuba ugxininise kuzo zonke iimpawu ezibalulekileyo zephishini lokulungiselela.
Ngaba uzakuzama ukufumana indawo ethile ngaphandle kweedithi ethile kunye nokuqeshwa? Kakade, unokufumana inhlanhla. Nangona kunjalo, usenokuphela kwelinye ilizwe. Ngaba uke wamufumana umnxeba ovela kumboneleli wendawo wolwazi ezama ukuzalisa isikhala esithile? Le mveliso yokutshisa ngomzuzu wokugqibela inika ukuthengisa i-airtime okanye isikhangiso sithuba sinokuza nomgaqo-nkqubo okhangayo. Ngoko ke, nangona isaziso sisengqiqweni, isigqibo sokugqibela singathetha ukuba usebenzisa imali eningayisebenzisiyo okanye imali oyifunayo ukuba utyalomle kwenye indawo. Xa uhlanganisa yonke imiphumo, uya kuqonda ukuba isigqibo sakho asikwazi ukuhlangabezana neenjongo zakho zokuthengisa kwaye uchitha imali kuphela kuyo.
Ngoko ke, ukuba ungenayo ixesha elingenamkhawulo okanye uncedo olungapheliyo lwemali, ufuna isicwangciso seenkonzo se-SEO esifanelekileyo ukwenza ukuba ishishini lakho le-intanethi liphumelele kwaye liphindwe kabini ingeniso yakho.
Ngaphezu koko, kufuneka uqinisekise ukuba iinjongo zakho zokuthengisa zizodwa, ziyalinganiswa, zifikeleleke, ziqikelele kwaye zenzeke ixesha. Isicwangciso sakho sifanele sicacise iinjongo zakho zophuhliso, kodwa ngendlela ecacileyo.